Fomba 11 hankafizana ny fiainana toy ny teo aloha - Blog
Ny ankamaroantsika dia mirona amin'ny fiainana an-tsitrapo, manaiky ny fiakarana sy ny fihoaram-pefy ary 'mizotra amin'izany fotsiny.'
Ny hevitra hoe mahasambatra kokoa sy mankafy fiainana dia manjavozavo sy mampatahotra. Tonga ao an-tsainay ny fanontaniana…
Misy ezaka be ve ao? Misy fomba maro azo hanatsarana ny fiainanao ve? Handany vola be ve?
Aza matahotra - manana hevitra mahomby izahay mba hampisondrotra ny haavon'ny fahasambaranao ary hahafahanao mankafy ny fiainana tsy mbola nisy toy izany.
Ny sasany amin'izy ireo dia mety handany vola kely aminao, fa ny ankamaroan'izy ireo dia ny famindrana ny sainao sy ny famerenanao ny herinao…
Fiainana dia tsara be, matetika! Ny olana dia mipoitra rehefa mieritreritra be loatra isika ary manomboka mampitaha ny tenantsika sy ny fiainantsika amin'ny hafa sy ny azy.
Mety ho sarotra ny mifantoka amin'izay ananantsika amin'ny fiainantsika rehefa tototry ny sarin'ny olona ‘miaina ny fiainany tsara indrindra’ isika.
Ny media sosialy dia afaka mandrisika ny fahatsapana ho tsy mahavita azy sy ny fiheveran-tena ho ambany. Miaina ao anatin'ny tontolon'ny sary voasivana sy tsy azo tanterahina isika andrasan'ny , izay afaka manasarotra mafy azy miaina amin'izao fotoana izao ary jereo ny zavatra tena misy.
Raha te hankafy bebe kokoa ny fiainanao ianao, ary amin'ny fomba vaovao, dia mendrika ny handinihanao hoe isaky ny inona ianao avelao ny tenanao hiala sasatra mandra-pahatongan'ny fotoana ary ankafizo ny tena zava-mitranga.
Tsy milaza izahay fa hilavo lefona tanteraka amin'ny media sosialy, fa manandrama manova kely ny fomba fijerinao mba hankafizanao izay tena eo alohanao.
Mazava ho azy, tsy mitombina ny manandrana manao izany isa-minitra isan'andro - samy manana ny eritreritsika sy ny fahatsapana tsy mahafinaritra isika indraindray.
Na izany aza, raha tsy mieritreritra ny fiainantsika intsony isika tokony jereo ary inona isika tokony manao fa aleo mifantoka amin'izay fiainantsika dia tahaka ny ary inona isika dia manao, dia handeha an-dàlana ho any isika mahatsapa afa-po bebe kokoa .
2. Avelao ho sambatra ny tenanao
Raha vantany vao mianatra ny ho eo amin'ny fotoana isika dia afaka miroso amin'ny fifaliana. Indraindray dia mila manome alalana ny tenantsika ho sambatra isika.
Mety ho hafahafa izany, saingy maro amintsika no tsy mangataka famelana. Ny fanekena ny misy antsika amin'ny fiainantsika sy ny mianatra mankafy dia mitaky ezaka sy hery be.
Isika rehetra dia mihemotra noho ny antony samihafa. Matahotra ny hiaiky ny sasany amintsika fa faly amin'ny fomban'ny toe-javatra isika satria manahy fa 'jinx' an'izany isika.
inona no hatao rehefa manambany anao ny vadinao
Tsy te hiala sasatra ao anaty fifandraisana izahay satria tsy te hamela ny tenantsika mifikitra loatra na miantehitra . Matahotra izahay milaza fa tianay ny asanay sao sanatria esorina amintsika io.
Ara-dalàna izany ary endrika fiarovana amin'ny fanaintainana amin'ny ho avy mety hitranga.
Amin'ny fanekena izany fanovana izany dia tsy azo ihodivirana, afaka mahita fomba hanararaotana tsara izay ananantsika isika ankehitriny ary mamela ny tenantsika hipetraka sy hiala sasatra.
Raha vantany vao manosika ny tahotra hifikitra amin'ny zavatra azo antoka ianao dia afaka mankafy azy ireo amin'ny toetrany ary ho faly.
Hanampy anao hankafy ny fiainanao tsy mbola nisy toy izany io ary hanova ny fomba fijerinao zavatra hafa,…
3. Mialà amin'ny tantara tsy ilaina
Andao ho marin-toetra - nisy fotoana tamin'ny fiainantsika rehetra izay nampiala voly ny tantara an-tsehatra.
Indraindray tena mahafinaritra ny manana be dia be ary mety ho fanelingelenana lehibe amin'ny fiainanao tena izy.
Ary, indraindray, io fanelingelenana io dia ho lasa fahavalonao ratsy indrindra. Ny drama dia mety misy poizina mampidi-doza ary afaka mitarika ny saintsika amin'ny làlan-dratsy.
Mety ho toa tsy mampidi-doza izy io tamin'izany fotoana izany, saingy mety hisy fiatraikany lalina kokoa noho ny mety ho tsapanao tamin'ny voalohany. Mety hisintona olona hafa hidina tsy fidiny io, na hamirapiratra jiro ratsy amin'ny fiainanao manokana.
Halaviro ity karazana fihetsika ity dia hahatsapa ianao fa tena afaka!
Raha vantany vao mamela ny toe-tsaina mitaraina momba ny olon-kafa ianao na miresaka momba ny zavatra nataonao manokana, dia hahatsapa ho voaverina indray ianao.
Ho tonga amin'ny sehatra iray ianao izay toa tsy dia ataon'ny manodidina anao amin'ny fifosana olona, ​​ary tsy maninona - atsangano ambonimbony ary tohizo amin'ny fiainanao manokana.
Amin'ny alàlan'ny fanovana ny fifantohana amin'ny tantara an-tsain'ny olon-kafa ho amin'ny zava-misy iainanao manokana, dia afaka tafiditra amin'ny fankafizanao ny fiainanao ianao tsy mbola nisy toy izany.
inona no zavatra ilain'izao tontolo izao?
4. Ampiasao ny ankamaroan'ny zavatra anananao
Ny fankafizana fiainana dia tsy mila midika hoe manampy zava-baovao aminy. Indraindray, midika fotsiny izany raiki-pitia amin'izay efa ao anatiny.
Eritrereto ireo zavatra efa anananao izay tsy zatra ny fahafahany feno. Ny fieritreretana fialamboly vaovao indraindray dia hampahatsiahy anao ireo zavatra mety halevina sy hadino.
Fahita kokoa noho ny nieritreretanao azy ity - ny ankamaroantsika dia manana fakantsary apetraka ao anaty vata any ho any, ary misy skate-roller natsipy tao anaty garazy!
Aza mividy zava-baovao isaky ny maniry mampiditra fientanam-po amin'ny fiainanao ianao, dia diniho izay efa anananao ary mitadiava fomba hanamafisana ny fampiasan'izy ireo.
Hanampy anao hahatsapa ho tsara kokoa amin'ny fiainanao izany - hahatsapa ho mahay mandrafitra ianao SY hahazo zavatra ‘vaovao’ ianao amin'ny ankapobeny. Toe-javatra mandresy ity…
5. Mampihatra Fankasitrahana isan'andro
Tsy mila mitady fomba vaovao hampiasaina ny zavatra efa anananao fotsiny ianao, fa afaka mahita fomba hieritreretana tsara kokoa ny toe-javatra misy anao ankehitriny.
Fanamby ny tenanao hatramin'ny 30 andro amin'ny fankasitrahana isan'andro ...
Ity dia afaka maka izay endrika mety indrindra aminao - azonao atao ny manoratra sy manoratra ireo zavatra ankasitrahanao mandritra ny tontolo andro, azonao atao ny mizara ny eritreritrao amin'ny olon-tianao ary mifamaly hevitra na, mazava ho azy, afaka mitazona ny eritreritrao ianao ho anao.
Na izany na tsy izany dia hanao dingana lehibe mankamin'ny fankafizanao ny fiainanao amin'ny fomba vaovao ianao. Aorian'ny 'fialofana, sakafo, fiarovana, fahasalamana' mahazatra dia mety mikapoka rindrina kely ianao.
Halalino lalindalina kokoa ary atombohy ny fieritreretana ny lafiny hafa amin'ny fiainanao izay tena manadanja anao.
Mety hoe tianao ny tsy mahazatra ao amin'ny kafe any an-toerana ary mahatsapa fa tsara fa fantatry ny barista hatrany ny baikonao. Mety ho toy ny hoe manam-potoana hitondrana ny alikanao handeha am-pandehanana aorian'ny asa ianao - na koa alika fotsiny!
Na inona na inona safidinao, mifantoha amin'ilay fahatsapana omeny anao. Aorian'ny herinandro voalohany na roa dia ho hitanao fa tena mora ny mieritreritra zavatra ankasitrahanao.
Raha vantany vao tapitra ny 30 andro dia tsy ho azonao atao ny manakana ny tenanao tsy hitsiky amin'ny kaopin'ny kafe entinao!
6. Ekeo ny fahombiazanao ary mankalazà
Ny iray amin'ireo antony mahatonga antsika betsaka tsy hahatratra ny ‘fahafinaretantsika fahasambarana’ feno dia satria variana loatra mifantoka amin'ny inona isika tsy mitranga eo amin'ny fiainantsika.
Mety ho sarotra be ny manara-maso ny fandrosoantsika manokana indraindray, indrindra raha mahatsapa tsy mitombina amin'ny asantsika, ny fifandraisantsika ary ny fiainantsika manokana isika.
Ny ampahany amin'ny tsy fahafinaretana feno amin'ny fiainana dia avy amin'ny fahatsapana fa tsy dia 'mahay' amin'izany isika.
Eto no misy ny fanombanana tena. Soraty ireo zavatra momba ny fiainanao tianao ovaina na tsy afa-po. Mety ho izay tonga ao an-tsaina izany, avy amin'ny tsy fahafahako miala amin'ny sigara ka mahatsiaro mankaleo amin'ny asa.
Tanisao daholo izany ary mametraha tanjona sasantsasany - fa mahaiza mandanjalanja sy manokana. Raha tokony 'hiala amin'ny sigara' ianao dia mifidiana zavatra toy ny 'mividy patches sy siligaoma mihaino kasety hypnotherapy' ary mieritrereta fomba ahafahanao manampy ny tenanao.
Raha tena mifantoka amin'ny tsindry ianao dia omeo fe-potoana farany. Mametraha fanairana amin'ny telefaonao hijerena ny lisitra afaka iray volana ary hahitanao ny fahombiazanao amin'ny tanjonao.
Mety hoe rehefa afaka iray volana dia tsy nividy patch ianao ary tsy nanao dingana mankany amin'ilay tianao ho tratrarina. Aza kivy!
Azo antoka fa tsy nanao izay kasainao hatao ianao, SAINGY ity dia mety miasa amin'ny antony manosika lehibe - te hijery indray ity lisitra ity ve ianao amin'ny iray volana ary manana fahatsapana fahakiviana mitovy?
Raha ianao eFA jereo ireo zavatra tsy ao anaty lisitrao ireo, mankalazà. Tsy miaraka amin'ny sigara, mazava ho azy!
Omeo ny tenanao ny laza mendrika anao ary manaova fanamarihana momba ny fahatsapanao mahatsapa ny fanaovanao izay nolazainao fa hataonao.
Ny fananana andraikitra amin'ny tenantsika dia zava-dehibe amin'ny fahatokisan-tena, ka mendrika ny hahatsapa ho tsara amin'izany ianao.
Mampahatsiahy anao koa izany ny fahatsapany mahatsapa mahatratra zavatra amin'ny manaraka hametrahanao tanjona - resaka fanamafisana tsara izany ...
Mialà amin'ny faritra mampionona anao ary mankamin'ny zavatra mahaliana. Azonao atao ny mizaha toerana efa fantatrao, tsy mila mandeha any ivelany ianao hanao traikefa nahafinaritra!
Makà fakantsary ary mivezivezy manodidina ny tanànanao - ho gaga ianao amin'ny zavatra maro hafa hitanao rehefa mandinika ianao.
Ny zavatra iray iainan'ny olona amin'ny resaka tsy finaritra amin'ny fiainana dia ny fahatsapana fa 'mikatona', amin'ny toerana tsy misy dikany amin'ny fiainany.
Ara-dalàna tanteraka izany ary mitranga amintsika rehetra indraindray, ary misy fomba mora hiatrehana izany.
Raha efa nipetraka teo amin'ny toerana iray ianao nandritra ny fotoana ela, dia tsy mahagaga raha mahatsapa ianao fa tsy misy zava-baovao ho anao. Amin'ny fivoahana sy fikarohana ara-batana dia hanomboka hiova ny sainao ary hanomboka hitady zavatra vaovao ianao.
Mety ho zavatra kely toy ny ravaky voninkazo miakatra eo am-pandriana voninkazo eny amin'ny fiarahamonina, na trano fisotroana kafe vaovao any ampitan'ny tanàna.
Zava-dehibe ny manamarika fa ireo zava-baovao ireo dia tsy mila manova fiainana fa mila mampatsiahy anao fotsiny fa misy fiovana mitranga manodidina anao.
Saintsaino ny fizaran-taona sy ny fiantraikan'izy ireo eo amin'ny tontolon'ny tranonao. Ampiasao ny vanim-potoana miova hanodinana ny toe-tsainao ho iray amin'ny fahatsapana ny fahatsapana sy ny fisokafana ary ho gaga ianao amin'ny zavatra maro no tsikaritrao sy ny fomba hamelombelona anao manomboka ny fitsangatsanganana tsirairay.
8. Andramo ny zava-baovao
Ankafizo bebe kokoa ny fiainana amin'ny fanitarana izay hamenoanao azy. Manandrama hetsika vaovao - toerana maro no manolotra andrana maimaimpoana ka tsy mila mandoa vola na manolo-tena alohan'ny fahavononanao.
Mendrika ny hijerena ireo kilasim-piarahamonina na fampianarana an-tserasera no hahagaga anao ny zavatra hitanao. Mandehana mitady zavatra ara-batana ary mankafy fanamafisana angovo, na misafidiana taranja akademika amin'ny Internet.
YouTube dia loharanom-pahalalana lehibe, miaraka amina horonantsary an'arivony maro hanentanana anao hanandrana fialam-boly vaovao, ary koa torohevitra sy fanampiana raha vao nanomboka ianao.
Raha manaraka fika sy hack vaovao ho an'ny fakantsarinao ianao, midira an-tserasera ary mitadiava tutorial vitsivitsy. Na araho ny dia ataon'ny olon-kafa rehefa manandrana Pilates na kickboxing voalohany - mahafinaritra foana ny mahafantatra fa tsy irery ianao amin'ireo hozatra mangidihidy ireo!
Raha vitanao ny mamoaka kely kokoa, ny fitsangatsanganana dia manokatra tontolo iray manontolo hisian'ny traikefa nahafinaritra sy hanana traikefa vaovao, ary hanome anao tombony vaovao amin'ny fiainanao manokana - ho avy eo isika…
9. Karakarao ny vatanao
Ampahany amin'ny 'miaina ny fiainanao tsara indrindra' sy mankafy ny fiainana feno dia ny fikarakarana ny vatanao.
Azo antoka fa fantatsika rehetra fa tokony hihinana voankazo sy legioma vao haingana isika, misotro rano betsaka ary manao fanatanjahan-tena tsy tapaka.
Mora tokoa ny manaiky ireo lafim-piainana salama ireo ary mampihena azy ireo, saingy zava-dehibe ny famoronana toerana ho azy ireo amin'ny fiainanao.
Amin'ny alàlan'ny fanovana ny sainao sy ny fiainanao ara-batana dia manomboka tsy hitanao ny zavatra hafa - mety ho afaka hanao zavatra mavitrika kokoa ianao toa ny bisikileta ataon'ny mpianakavy, na mety hahazo mazava ianao amin'ny resaka toe-tsainao amin'ny alàlan'ny fisaintsainana.
Na izany na tsy izany, ny fitondrana ny vatanao toy ny tempoly dia tsy hevitra ratsy akory! Ny yoga sy ny fisaintsainana dia hisy fiatraikany lehibe eo amin'ny fiainanao, na dia manao fanazaran-tena kely fotsiny aza ianao.
Ny fihinana tsara sy ny fijanonana ho hydrated dia hanampy anao hankafy bebe kokoa ny fiainana satria hahazo hery sy hiasa tsara kokoa ianao.
Hisy fiatraikany amin'ny fihetsikao momba ny asa, ny fifandraisana ary ny fisakaizana, izay misy fiatraikany lehibe amin'ny fifaliana sy ny fahafinaretanao.
Amin'ny alàlan'ny fiasana na fanaovana dingana hampidirana fanatanjahan-tena bebe kokoa amin'ny fiainanao, ny vatanao dia hamela anao hanao zavatra betsaka kokoa noho izay heverinao fa mahavita azy.
Na izany aza misafidy ny hanao fanovana ianao dia hahita fiovana lehibe eo amin'ny sehatry ny fiainanao amin'ny fotoana fohy!
10. Miezaha ho tsara fanahy amin'ny tenanao
Makà fotoana hanaovana izay mahasalama anao. Mety ho toa tsotra izany, saingy hanokatra vavahady hankafizanao ny fiainana amin'ny sehatra vaovao tanteraka.
Araka ny efa noresahintsika, dia mety hasiaka amin'ny tenantsika isika - marina fa mpitsikera henjana indrindra ho antsika manokana isika. Mety hampidi-doza tokoa ny fampitahana ny tenantsika amin'ireo manodidina antsika sy izay hitantsika amin'ny media sosialy.
Izany rehetra mitambatra izany dia mety hitarika sazy mihatra amin'ny sazy misy poizina - sosotra amin'ny tenantsika isika amin'ny tsy maha-'mahay / mahomby / mahomby' toy ny hafa ary manosika ny tenantsika ho amin'ireo hetsika tsy misy fitsaharana hanandrana ‘hanatsara ny toe-javatra misy antsika.
ataovy malahelo ahy izy toa adala
Mety hidika izany fa hijanona aorian'ny asa mandritra ny ora maro, ny fanerena ny vatantsika reraka amin'ny alàlan'ny fotoam-pivarotan-tena mampihetsi-po, na ny famoronana toerana tsy fahasalamana ara-tsaina ratsy amin'ny fanamelohana tsy tapaka ny tenantsika.
Mety ho toa fihetsika mahazatra ireo, na indray fihetsika fa tsy salama. Betsaka amintsika no manasazy ny saintsika fa tsy miasa hanatsara ny tenantsika - ary misy fahasamihafana lehibe tokoa amin'ireo zavatra roa ireo.
Raha tokony mikapoka ny tenantsika isika dia mila mianatra maneho hatsaram-panahy amin'ny tenantsika ary miaiky fa mitombo sy miova tsy tapaka isika.
Amin'ny fanaovana izany dia afaka mandany fotoana sy hery hikarakarana ny tenantsika isika ary hameno ny fiainantsika zavatra tsara izay tiantsika.
Mampihomehy, arakaraka ny ahazoantsika aina kokoa amin'ny fiainantsika manokana sy ny fanaovantsika zavatra ankafizintsika no hahatsapantsika tsara kokoa ny tenantsika - ary ny mety hivoarantsika amin'ny asa, te ho salama kokoa, ary hanolo-tena kokoa ny filantsika .
Ny zava-drehetra dia hianjera amin'ny toerany raha vantany vao manomboka miahy ny tenanao ianao ary mamela ny fanomezan-tsiny ataonao manapotipotika ny tenanao.
11. Drafitra. Fa koa Mahereza .
Fantatray - torohevitra mifanipaka! Indraindray ny drafitra dia afaka manampy anao hahazo tombony betsaka amin'ny fiainana, ary ny fotoana izay mamela anao hanompo anao tsara kokoa.
Fantatsika rehetra ilay ohabolana hoe 'miaina isan'andro toa ny farany anao', saingy tsy dia zava-misy izany rehetra izany - iray, mety hiala amin'ny asanao ianao!
Raha tokony hitandrina amin'ny rivotra isika, dia tsy tokony hiaro kely ny rivotra ho malefaka kokoa…
Drafitra ny toerana tokony hisy anao - ny zavatra mifandraika amin'ny asanao, ny zanakao, ary ny toe-bolanao, ohatra, dia mila jerena tsara.
Amin'ny alàlan'ny fandefasana an-tsarintany ireo faritra ireo amin'ny fiainanao, dia hatsangana ianao hahita fahombiazana maharitra ary afaka miala sasatra amin'ny ankehitriny ianao ary hianina amin'ny fahalalana fa nanaporofo ny fiainanao amin'ny ho avy.
Ity dia afaka manampy anao hankafy bebe kokoa ny fiainana satria tsy mila miahiahy be loatra amin'ny zavatra lavitra ianao.
Izany dia milaza fa misy faritra amin'ny fiainanao izay mila ianaranao mamela kely - izany dia tena hanosika anao ho amin'ny fitiavam-piainana vaovao!
Eo indrindra no ilana ny fivezivezena sy ny fizahana ary ny fahalalana fahaiza-manao vaovao. Eritrereto ireo lafiny amin'ny fiainanao ahafahanao miala sasatra ary avy eo mitady azy.
Ny fandaminana ny zava-drehetra dia mety hahatonga antsika ho fadiranovana ary mankaleo tokoa ny fahafantarana tsara hoe hanao ahoana ny fiainanao.
Amin'ny alàlan'ny fahitana izany fifandanjana eo amin'ny fahatsapana sy ny fahaizan-tena izany dia hisokatra amin'ny fahafinaretana bebe kokoa ianao.
Mbola tsy azonao antoka hoe ahoana no hanombohana mankafy bebe kokoa ny fiainanao? Miresaha amin'ny mpanazatra fiainana anio izay afaka mitarika anao mandritra ny fizotrany. Tsindrio fotsiny eto raha hifandray amin'ny iray.
Ahoana ny fomba hamerenana amin'ny laoniny ny fiainanao rehefa misaraka ny zava-drehetra
Antony 10 Tsy tokony horaisinao amin'ny fomba hentitra loatra ny fiainana
zavatra mamy hatao amin'ny zazavavy tianao
zavatra hatao ho an'ny olona tsy misy namana
inona no lalaovina rehefa mankaleo ao an-trano ianao
famantarana mazava tsara fa tian'ny tovovavy ianao
inona ny famantarana ny fitiavana